Iifowuni ezili-10 eziphambili kunye nobomi bebhetri obugqwesileyo (ngoMeyi 2015)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iifowuni ezili-10 eziphambili kunye nobomi bebhetri obugqwesileyo (ngoMeyi 2015)
Iifowuni ezili-10 eziphambili kunye nobomi bebhetri obugqwesileyo (ngoMeyi 2015)
Isityalo seeflegi eziphambili zeli xesha lonyaka liphelileyo sele zityhilwe zaza zenziwa ingxelo ngazo. Sineefowuni ezinkulu zokukhetha ezivela macala onke-i-Samsung, i-Apple, i-LG, i-Sony, i-HTC kunye neejuggernauts zaseTshayina ezinje ngeHuawei. Bonke baya kuwenza umsebenzi wenziwe, kwaye ke abanye, yiyo loo nto & kunzima ukufumana enye njengomqhubi wemihla ngemihla. Ngenxa yokungahoywa okwahluka komsebenzisi ekuqhubeni amandla, isikrini okanye umgangatho wekhamera phakathi kweeflegi kwezi ntsuku, sifuna ukuzibeka kwinqanaba elinye lezona zinto zibalulekileyo zisenza umahluko omkhulu- ubomi bebhetri- ukukunceda usike ukuthengisa.
Siziqhubile zonke iiflegi zakutshanje kuvavanyo lomgangatho webhetri esele ibekiwe, kwaye, ngelishwa, kuye kwavela ukuba eli xesha lonyaka kwaye izityalo azibonisi nayiphi na inkqubela phambili ngokubhekisele kubomi bebhetri xa kuthelekiswa nexesha lokugqibela & ampos; s, okanye nakwabo bangaphambi kwabo ezaziphume malunga nonyaka odlulileyo ngeli xesha. Ukungena koyilo lwe-premium unibody kunye nemiboniso ye-Quad HD ngokuqinisekileyo kuye kwathintela inkqubela phambili yonyamezelo lwebhetri, ke kulo nyaka uphelileyo iimbaleki zisalawula, ubuncinci de silinganise into eza kwenziwa nguSony ngokulandelayo. Nazi i-10 zeeflegi ezikhoyo ngoku ezibekwe kubomi bebhetri- ukusuka kwezi onokuzithatha ngokulula ngeempelaveki kude kwitshaja, kwaye usenayo ijusi ngoMvulo, ukuya kuthi ga kuyo oya kuyenza usuku lonke.
Ubomi bebhetri(iiyure) Ephakamileyo kungcono LG G4 6h 6 imiz(Ihlwempu) IHTC One M9 6h 25 imiz(Ihlwempu) Imoto ye Motorola yemoto Turbo 10h imizuzu engama-42(Egqwesileyo) I-Samsung Galaxy S6 7h 14 imiz(Umyinge) I-Sony Xperia Z3 9h 29 imiz(Kulungile) Isamsung Samsung Note4 8h 43 imiz(Kulungile) Xiaomi Mi 4 8h 32 imiz(Kulungile) IHuawei P8 7h 12 imiz(Umyinge) I-Apple iPhone 6 Plus 6h 32 imiz(Umyinge) I-Google Nexus 6 7h 53 imiz(Umyinge)
Ukutshaja ixesha(imizuzu) Ezantsi kungcono LG G4 127 IHTC One M9 106 Imoto ye Motorola yemoto Turbo 126 I-Samsung Galaxy S6 78 I-Sony Xperia Z3 235 Isamsung Samsung Note4 95 Xiaomi Mi 4 126 IHuawei P8 180 I-Apple iPhone 6 Plus 171 I-Google Nexus 6 98
IHTC One M9
I-Apple iPhone 6 Plus
Isamsung Samsung Note4
I-Sony Xperia Z3
Imoto ye Motorola yemoto Turbo
Eyona Ndibano ye-Smartwatch yeAmazon yoSuku: Iwotshi yeSamsung, uFitbit, uGarmin kunye nokunye
I-Samsung Galaxy Note 8 (US) iya kuhlaziywa kwi-Android Oreo kwiiveki ezi-2-3